How'd it happen and more reports?: အမေရိကန် ဆပ်ပရိုင်း (Sub-prime) ဒေါ်လာဒုက္ခ နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြဿ နာများ
အမေရိကန် ဆပ်ပရိုင်း (Sub-prime) ဒေါ်လာဒုက္ခ နှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြဿ နာများ
တက်ကြွနေတဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးလူငယ်တွေကို စီးပွားရေး၊ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ပညာယူသင့်တဲ့
"အိမ်ဈေးတွေလဲ အတက်ရပ်သွားရော ခုန လူလည်နည်းနဲ့ ချေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ ချေးငွေ Loan တွေ ပြဿ နာ ပေါ်တာကို မရှင်းနိုင်ကြတော့ဘူး၊ ဝယ်ကတည်းက မိမ်ိရဲ့ ငွေတပြားမှ ရှေ့ မှာ မပေးခဲ့ရတော့ အထူးသဖြင့် Sub-prime လူတွေက Mort age ဖိုး မတတ်နိုင်တော့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားပြီး ဘဏ်တွေ လက်ထဲမှာ
အိမ်အလွတ်တွေ သောင်တင်ပြီး လစဉ်ဝင်ငွေ မရတော့ဘဲ အရှုံးပေါ် တော့တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီမြုပ်နှံမှု Investment Bank ကြီးတွေဟာ ဘီလျံနဲ့ ချီပြီး ရှုံးတော့ တခြားဘဏ်တွေလဲ ကြောက်ပြီး ငွေချေးတာကို ကြပ်ပစ်ကြတော့ အမေရိကားမှာ Credit Crunch လို့ ခေါ်တဲ့ ငွေချေးရခက်တဲ့ ပြဿနာ ပေါ်လာတယ်။ ငွေချေးရ
ခက်ရင် လုပ်ငန်းတွေ နည်းသွားပြီး Economic Slow Down လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေး နှေးကွေးမှု ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေနဲ့ တကမ္ဘာလုံးရှိတဲ့ ငွေတတ်နိုင်သူတွေလဲ အထိနာကြတာပဲ။ အမေရိကန်မှာ လူ(၃)သန်း လောက် အိမ်တွေကို စွန့်သွားရတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်" ။
ဒီဆောင်းပါးဟာ မြန်မာလူငယ်တွေ ဗဟုသုတတိုးစေဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးမို့ တချို့က ပျင်းစရာလို့ ထင်ကောင်း ထင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်ကို ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်
တည်ဆောက်ချင်တဲ့ စေတနာရှိရင် စီးပွားရေးပညာကို လေ့လာနားလည်ရပါမယ်။ တိုင်းပြည် ဒီမိုကရေစီရရင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လက်ရှိ လူငယ်တွေအပေါ် မူတည်မှာပါ။ ဒါကြောင့် စေတနာရင်းမှန်နဲ့ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ ယနေ့ခေတ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမေရိကန်စီးပွားရေး နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိရင် ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံ
တချိူ့လဲ လေဟပ်ခံ ရပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် မနေ့တနေ့က အမေရိကန်စီးပွားရေးဟာ Recession လို့ ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ ဝေါလ်စထရိ Wall Street မှာ စတော့ stock ဈေးတွေ ထိုးကျတာကြောင့် အာရှဈေးကွက်နဲ့ ဥရောပဈေးကွက် မှာလည်း ဈေးတွေ ထိုးကျခဲ့ရပြီး စီးပွားရေး မငြိမ်မသက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးထိုးကျပြီး ရွှေဈေးနဲ့ရေနံဈေးတွေ ထိုးတက်ပြီး ကမ္ဘာဘဏ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာစီးပွားရေးဈေးကွက် မငြိမ်မသက် ဖြစ်တာကြောင့် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် Federal Reserves က ဘဏ်အချင်းချင်း ချေးတဲ့အတိုးနှုန်းကို (0.75 basic-point)၊ ဝ.၇၅ အမှတ်အထိ ပုံမှန် အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၉)ရက်နေ့မှာ တကြိမ် ထပ်ချပေးခဲ့ရပါတယ်။ထို့နည်းတူ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက် ၂ဝဝ၈ မှာ (0.75basicpoint) အရေးပေါ် ချပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဦးဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခြခံနဲ့ ပကတိအနေအထား လုပ်ထုံးလုပ်ဟန်နဲ့ စီးပွားရေး
စနစ်ကို သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
စီမံကိန်း စီးပွားရေး ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ်ဆိုးကြောင့် ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ကွန်မြူနစ် စနစ်ကြီး မြေမြုပ် သဂြိုလ်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းကမ္ဘာကြီးမှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပဲ ရှင်သန် ကျန်ရစ်ပါတော့တယ်။ သို့သော် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖေါ်ဆောင်ရာမှာ ပုံသဏ္ဍန် Model အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်၊ အကြမ်းအားဖြင့် အမေရိကန်ပုံစံ ၊ ဥရောပပုံစံ နဲ့ တရုတ်ပုံစံ လို့ နောက်ဆုံး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒ်ီပုံစံ အမျိုးမျိုးမှာ အမေရိကန်ပုံစံက ဈေးကွက်ကို (လွှတ်) အပေးဆုံးပဲ။ အစိုးရကဝင်ပြီး မထိန်းချုပ်ဘူး။ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း
အနည်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥရောပပုံစံနဲ့ တရုတ်ပုံစံက အစွန်းမရောက်ရအောင် ထိန်းချုပ်မှု ပိုရှိတယ်။
နောက်မှ ဒီပုံစံတွေကို ယှဉ်ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်။
အရင်းရှင်စနစ်ကို အခြေခံတာက လောဘ၊ တွန်းပို့တဲ့ တွန်းအားနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုပဲ။ ဘယ်ပစ္စည်းဟာ လူကြိုက်များပြီး ရောင်းရမယ် ဘယ်ပစ္စည်းကိုတော့ လူမကြိုက်၍ မရောင်းရပါ ဆိုတာက ဈေးကွက်က ဆုံးဖြတ်တယ်။ ဒီဈေးကွက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတာက စားသုံးသူ ဖြစ်တယ်။ ဈေးကွက်မှာ ဈေး (သို့) တန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်တာက Supply & Demand လို့ ခေါ်တဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုနဲ့ လိုအပ်မှုတို့ကပဲ ဖြစ်တယ်၊ ဥပမာ - ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ လူဦးရေသန်း ၆ဝဝဝ နဲ့ သန်း ၇ဝဝဝ အကြား ရှိပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးအတွက် တနေ့ ရေနံစည် ၈ဝသန်း လိုခဲ့ရင် တနေ့ ၈ဝသန်းကျော်ကျော် ထုတ်နိုင်လို့ ဈေးကွက်မှာ ရေနံတွေ ပေါများနေရင် ရေနံဈေးကျမယ်။ အကယ်၍ လိုတာက (၈ဝ)သန်း၊ ထုတ်နိုင်တာက (ရဝ)သန်းပဲရှိရင် ရေနံဈေးဟာ ထောက်လျောက် တက်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အရင်းရှင်စနစ်နဲ့ ဘုရားတဆူလို့ ပြောလို့ရတဲ့ အဒန်စမစ်က မမြင်ရတဲ့ လက်ဆို
ပြီး သုံးနှုန်း သွားပါတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်ကို လေ့လာချင်ရင် Adam Smith ရေးတဲ့ Wealth of Nations စာအုပ်ကို ဖတ်သင့်ပါတယ်။
ဒီလို ဈေးကွက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး (လောဘ) ကို အခြေခံတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်မှာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့
လူညာတွေ အများအပြား ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်းရှင် စီးပွားရေးစနစ်ကို ဖေါ်ဆောင်ရင် ခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အစိုးရရဲ့ စောင့်ကြပ်မှု စည်းမျဉ်း ရှိရပါတယ်။ သို့သော်လည်း စည်းမျဉ်း သိပ်တင်းကြပ်ရင် စီးပွားရေးအောင်မြင်မှု ခက်ခဲမှုရှိပြီး သိပ်လျော့လွန်းရင်လည်း အတက်အကျ ပြင်းထန်တတ်ပါတယ်၊ အမေရိကန်တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်က အစိုးရက အနည်းဆုံး ကြပ်မတ်ရမယ်။ ဈေးကွက်က တာဝန်ယူပါစေလို့ ယုံကြည်တာကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဟာ အလွတ်လပ်ဆုံး ဖြစ်သလို အမေရိကန်စီးပွားရေးမှာ Boom & Bust Cycle လို့ ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေး တဟုန်ထိုးတက်မှုနဲ့ ပေါက်ကွဲပြုတ်ကျမှုဟာ ဒွန်တွဲ နေတတ်ပါတယ်။ ၁၉၈ဝခုနှစ်များက သမ္မတ ရေဂင် လက်ထက်မှာ Real Estate & Thrift Boom/Bust ၁၉၉ဝခုနှစ်များက Tech (Internet) Boom/Bust ၊ ယ္ခု 2008 မှာ Housing Boom/Bust ၊ အမေရိကန်ပုံစံမှာ စီးပွားရေးတက်ပြီး ပြုတ်ကျမှု ဖြစ်စမြဲပါ။
Boom - Time မှာ လုပ်ငန်းတွေပေါ ကုမ္မဏီနဲ့လူတွေ ဝင်ငွေရွှင်ရင် များများသုံး ဒါကြောင့် အစိုးရက ဝင်မနှောင့်ယှက် မတားဆီးပါ။ ထို့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရစီ အခြေခိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု ရှိတယ်လို့ ယူဆကြတာကြောင့် တကမ္ဘာ့လုံးက ငွေရှင်ကြေးရှင် တွေ ကလည်း Boom Time မှာအမေရိကန်မှာ မြှုပ်နှံအရင်းပြု လုပ်ကြတာကြောင့် Boom Time ငွေရွှင်ကြပါတယ်။ ဈေးတွေ အဆမတန် တက်ပါရင် တချိန်မှာ ဈေးကွက်က ထိုးချလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကို Bust လေပူဖေါင်း ပေါက်ကွဲသလို ပေါက်ကွဲကျဆင်းမှု ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို Bust မဖြစ်ခင်တနှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက် ကတည်းက စေတနာရှင် ပညာတတ်တွေ အတွေကြုံရှိသူတွေက သတိပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တွေက အင်တာနက်စတော့ မတရားဈေးတက်တော့ သတိပေးသူတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ အများက လောဘဇောတက်နေတာေ
ကြာင့် သတိမမူ မိကြပါ၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာသူများကတော့ ကြေးစားတွေကို ငွေပေးခိုင်းတာကြောင့် Bust ဖြစ်တာနဲ့ စတော့တွေ ရောင်းပြီး ငွေပုံမှာ ထိုင်နေလေ့ ရှိပါတယ်။ Bust မှာ ဒုက္ခရောက်လေ့ ရှိတာက အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ လောဘသား အများစု ဖြစ်တယ်။
Bust ဖြစ်ရင် တနာရီမိုင် (၁ဝဝ) နှုန်းနဲ့ မောင်းနေတဲ့ကားကို ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်လိုက်သလို Boom
ဖြစ်နေတဲ့ စတော့ဈေးတွေ ထိုးကျပါတယ်။ ဥပမာ - ၁၉၉ဝ ခုနှစ်များအကုန် ၂ဝဝဝခုနှစ် တွေတုန်းက အင်တာနက်စတော့ ဈေးတွေထိုးကျတော့ ကုမ္မဏီတွေ လူတွေ ရှုံးကြတော့ တပြည်လုံးမှာ ယုံကြည်မှု နည်းပြီးတော့ လူတွေက အသုံးရပ်သွားသလို ကုမ္မဏီတွေကလဲ အသုံးရပ်သွားတယ်။ ဒါ့အပြင် လူပိုတွေ လျော့ချရတော့ လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ ဘဏ်တွေကလည်း ငွေလွယ်လွယ် မချေးတော့ပါ။ ဒါကို Credit Crunch လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ Monetary Policy နဲ့ ဘတ်ဂျတ်အသုံး ပေါ်လစီ Fiscal Policy ဆိုတာရှိပါတယ်။ Monetary policy ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဗဟိုဘဏ်က လွပ်လွတ်လပ်လပ် ချမှတ်ခွင့် ရှိပြီး Fiscal policy ကို သမ္မတနဲ့ ကွန်ကရက်က ချမှတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ၄င်းရဲ့ ငွေကြေး တန်ဖိုးဟာ ၄င်းနိုင်ငံရဲ့
ငွေကြေးပေါ်လစီနဲ့ ဘတ်ဂျတ်အသုံး ပေါ်လစီတို့ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ နိုင်ငံအများရဲ့ ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့ အဓိကတာဝန်က ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုကို ထိန်းကွပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဦးစားပေးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဗဟိုဘဏ် ဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အတွက်လဲ ကြပ်မတ်ရပါတယ်။
ကျနော် အမေရိကန် ဆပ်ပရိုင်း Sub Prime ဒုက္ခ-အပိုင်း (၁) ကို ရေးခဲ့စဉ်က အမေရိကန်စီးပွားရေးစနစ် ခေါင်က မိုးပြိုလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး။ လူအများ တွေးကြတဲ့အတိုင်း - စီးပွားရေးဒုက္ခ Economic Crisis တခုလို့ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်။ အခုမှ အရူးမီးဝိုင်းသလို - အမေရိကန် စီးပွားရေးစနစ် ခေါင်က မိုးပြိုကိန်း ရောက်နေမှန်း ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူ အမေရိကန် အစိုးရ အပါအဝင် သိကြတော့တယ်။
လက်ရှိပြဿနာဟာ အင်မတန်မှ ရှုတ်ထွေးတာကြောင့် သာမန်လမ်းပေါ်က အမေရိကန်လည်း နားမလည်နိုင်
ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် Wall Street ဝေါလ်စထရိ က ငွေရှင် သူဋ္ဌေးတွေကို ဘာကြောင့် ပြည်သူပိုင်တဲ့ အစိုးရဘဏ္ဍာငွေနဲ့ ကူညီရမှာလဲဆိုပြီး စိတ်တိုလျက် ရှိကြပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လို့ခေါ်တဲ့ အောက်လွှတ်တော် အမတ်တွေဟာ အမေရိကန် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေအရ ပြည်သူနဲ့ မကင်းဝေးသွားအောင် ၂ နှစ် တကြိမ် ပြည်သူ့ရှေ့မှာ ပြန်လည်အရွေးခံကြရပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါတယ်။ ဝေါလ်စထရိက ငွေရှင်၊ ကြေးရှင် တွေကို ကူရကောင်းလားလို့ အမျက်ထွက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေက ဒဏ်ခတ်မှာ ကြောက်လို့တကြောင်း၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ အစိုးရက ဝင်မစွက်ရဘူး ဆိုတဲ့ တယူသန် ရှိကြတဲ့ လက်ျာ တဖက်စွန်းရောက် အောက်လွှတ် တော် အမတ်တွေကြောင့်တကြောင်း လက်ရှိဥပဒေ အဆိုပြချက်ဟာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်ငင်း အကျိုးဆက်က အမေရိက Dow Jones စတော့ ဈေးကွက်ဟာ ၇၇၇ ပွိုင့် ထိုးကျဆုံးရှုံးးခဲ့ပါတယ်။ ၉/၁၁ ဖြစ်ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ တနေ့တာ ကျဆုံးရှုံးခြင်း ၇၂၁ ဒဿမ ၆၅ ပွိုင့်ထက် ပိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အရင်းရှင် (သို့) ငွေကြေးမှုပ်နှံသူတွေက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အမေရိကန်ဈေးကွက်ကို အယုံအကြည်မရှိဘူး၊ မသေချာ မရေရာတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စတော့တွေကို ထုတ်ရောင်းမှုကြောင့် စတော့ဈေးတွေ ကျရတာပါ။ ဒီ စတော့ (ှအသခု) ဈေးတွေ ကျဆုံးမှုဟာ လက်ရှိ Credit Crunch ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါတယ်။ ဘဲဥအစ ရှာမရသလို ပြဿနာတွေက ရွာလည် နေပါတယ်။
ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာက်ို လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတောင် အများစု လက်ရှိ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတဲ့ သာမန်လမ်းပေါ်က လူတွေကိုယ်၌က ပြဿနာရဲ့ အရင်းနဲ့ ရှုပ်ထွေးဆက်စပ်နေကြပုံကို ကျကျနန မသိတာကြောင့် ဘယ်လောက် အန္တရာယ်ကြီးမားတယ် ဆိုတာကို မသိရှာသေးကြပါဘူး။ ပြဿနာကလည်း အဆင့်ဆင့် ရှုပ်ထွေးလည်ပတ်နေကြတာကြောင့် စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားသူလိုက်စားသူ
မဟုတ်ရင် အသေးစိတ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရန် မလွယ်ကူလှပါ။ သုံးစွဲတဲ့ အသုံးအနှုံးများမှာလည်း
ကြားနေကျ အသုံးအနှုံးများ မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာကို မသိလို့ မရတော့ပါ။ အသေအချာ လေ့လာရင်လည်း အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီပြဿနာအားလုံးဟာ ဒေါ်လာပြဿနာ၊ ရေနံပြဿနာ၊ ဆန်ပြဿနာတို့ အားလုံးနဲ့ ဆက်စပ် ငြိတွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဓာတ်ဆီဈေးတွေ တက်၊ ကားတွေ ရှိပြီး ကားတွေရပ်ထားတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံကြရတယ်။
ဆန်ဈေးတက်တော့ လူတွေ ထမင်းမဝတော့ဘူးပေါ့။ ဒါ့အပြင် နောင်တခေတ် မြန်မာပြည်ကြီးကို ထူထောင်ရမယ့် မြန်မာလူငယ်လေးတွေကို သတိပြုစေချင်တာက နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာစီးပွားရေး ခေါင်းထောင်မှ တိုင်းပြည်ရော၊ ပြည်သူပါ ချမ်းသာလာကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဟာ အရေးပါလှပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာဟာလည်း စီးပွားရေးနဲ့ မကင်းနိုင်ပါ။
အရင်းရှင်စနစ် လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက် Free Market ဆိုတာက (ချေးငွေ) Credit နဲ့ ငွေလည်ပတ်မှု Liquidity အပေါ် မူတည်နေတာကြောင့် ငွေမလည်ပတ်နိုင်ရင်၊ ငွေချေးမရရင် စီးပွားရေး ယန္တရားကြီးတခုလုံး မရပ်သွားတောင် တုံ့နှေးကုန်တာပေါ့။ မော်တော်ကား ဆီမလိုက်ရင် တွန့်ဆုတ် တွန့်ဆုတ်နဲ့ ရွှေ့နေသလို နွားလှည်းကြီး နွံနစ်နေသလိုပဲပေါ့၊ Credit Crunch ရဲ့တရားခံအရင်းက အိမ်ယာမြေဈေးကွက်။ အိမ်ဈေးတွေ မတရားတက်ပြီး ပေါက်ကွဲပြုတ်ကျတာကြောင့်ပါ။ ဒီ ပေါက်ကွဲမှုဟာ ဆပ်ပရိုင်း Sub Prime ဈေးကွက်က စခဲ့တာပါ။
ဆပ်ပရိုင်း အပိုင်း(၁) မှာ Boom & Bust, Housing Bubble, Sub Prime ဆိုတာကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
Bust ဖြစ်တိုင်းမှာ လူတွေက ကြောက်လန့်ပြီး ငွေချေးတာ လက်တွန့်သွားပြီး ငွေမချေးကြတော့ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဘဏ်တွေက ရဲရဲမချေးကြတော့ဘူး။ ဒါကို Credit Crunch လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကုမ္မဏီကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ မိမိလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် ငွေလိုရင် ဘဏ်တွေဆီ ပြေးချေးကြပါတယ်။ Credit Crunch ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘဏ်တွေက ငွေ လွယ်လွယ် မချေးကြတော့ လုပ်ငန်းတွေ နှေးကွေးကုန်တာပေါ့။
ငွေမလည်တော့ လုပ်ငန်းတွေနှေး၊ ဒီတော့ အပိုလူတွေလျှော့၊ အပိုပစ္စည်းတွေ မဝယ်နိုင်ကြတော့၊ အားလုံး ရောင်းအားကျနဲ့ စီးပွားရေးနှေးကွေးမှု ဆိုတာဖြစ်ပါရော။ ဒီမှတဆင့် ၃ လပတ် ဆက်တိုက် တပြည်လုံး
ထုတ်ကုန် အနုတ်လက္ခဏာပြခဲ့ရင် - စီးပွားရေးကျဆင်းမှုလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ၆ လတိတိ တပြည်လုံး ထုတ်ကုန် ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့ရင် စီးပွားရေးကျဆုံးမှု Recession ဖြစ်ပြီပေါ့။ ဒါထက်ဆိုးခဲ့ရင် စီးပွားရေးကပ Depression ဆိုက်ပြီလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။
အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ အမေရိကန်စီးပွားရေး အခြေအနေဟာ Recession ရောက်လုရောက်ခင် ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် Recession ကနေ Depression အထိ ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်ပါ
တယ်။ အမေရိကန်ကတဆင့် တကမ္ဘာလုံး ပန်နှံ့ပြီးတကမ္ဘာလုံး စီးပွားရေးကပ် ဖြစ်နိုင်စရာ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။
ဒီ ဗရာမင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဘယ်အထိ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်တယ် ဆိုတာကို ကျနော်ရဲ့ လက်တွေ့
ဟိန္ဒူဘာသာမှာ ဇာတ်အဆင့် ၅ မျိုး ရှိတယ်။ အမြင့်ဆုံးဇာတ်က ဗရာမင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗရာမင်တွေဟာ
(ဇာတ်) သိပ်မြင့်တဲ့အတွက် တခြားသူတဦးကသူတို့စားတဲ့ ပန်းကန်ကို ထိမိရင်တောင် ထမင်း ဆက်မစားတော့ဘူးလို့ ဆို နိုင်ပါတယ်။
တခါ ဗုဒ္ဓဂါရာကို အသွား ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတခုကို ဝင်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဒီဘုရားကျောင်းအတွင်းမှာ
အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ရေချိုးရာနေရာကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ရေချိုးဖို့ အဆောက်အဦမှာ (ဇာတ်) အလိုက် အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးအဆင့်က ဗရာမင်များ ချိုးပြီး ရေကို ရေမြောင်းကတဆင့် ရေခံပြီးနောက် (ဇာတ်) တွေက ချိုးရပါတယ်။ ဒီလို အဆင့်ဆင့် ရေခံပြီး စီးဆင်းစေရာ အောက်ဆုံးအဆင့် Untouchable အဆင့်ကို ရောက်တဲ့အခါ ရေဟာ ညစ်ပတ်တဲ့ ဆပ်ပြာရေ ဖြစ်နေပါပြီ။ အောက်ဆုံးအဆင့်မှ လူတွေဟာ ဗရာမင်တွေ ဘယ်လို စံစားနေတယ်ဆိုတာ မမြင်ရ (တက်ခွင့်မရှိ) ဆပ်ပြာရေတွေကိုပဲ ကျေကျေနပ်နပ် ချိုးသုံးနေတာကို မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ဒီကနေ့အထိ မမေ့နိုင်ပါ။
အောက်ဆုံးအဆင့်ကနေ ကြည့်ရင် ဗရာမင်တွေဟာ တိမ်ညွန့်ခူးစားနေတဲ့ နတ်ဘုံ၊ နတ်နန်းက သူတွေနဲ့ တူပါတယ်။ ဝေးလွန်းတဲ့ အမြင့်ဘုံမှ (ဇာတ်) မြင့်တွေ ဖြစ်တယ်။ အမေရိကန် အရင်းရှင်စနစ်တွင် (ဇာတ်) လို လူတန်းစား အတိအကျ မခွဲထားပေမယ့် ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်အတန်း ကွဲတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးအဆင့် လခစား (သို့) နေ့စားလုပ်သားတွေဟာ နေ့ဒဓူဝ အလုပ်ဝင်၊ အလုပ်ထွက် လခ (သို့) နေ့စားရကြတယ်။ အမြင့်ဆုံးအဆင့် လူချမ်းသာ (ဗရာမင်) တွေက ငွေပုံပေါ်ထိုင်ပြီး ငွေရှာကြတာကိုမမြင်ရမသိနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် Main Street လူတွေက Wall Street က လူတွေကို ငေးမျှော်
ကြည့်ကြရတယ်။ ခွဲခြားမှု (ဇာတ်) ဆိုတာဘယ်စံနစ်မှာမဆို ကောင်ကျိုးမပေးပါဖူး။
ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတိုင်း ထောင်စည်းကမ်းအရ ၂ ပတ် တခါ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်ရကြပါတယ်။ ဒါကို
(ထောင်ဝင်စာ) တွေ့တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကျဉ်းသားအများစုရဲ့ ဇနီး၊ သားမယား၊ ဆွေမျိုး၊ မောင်နှမ၊ မိသားစု အများစုက မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ငွေကလေးနဲ့ ငါးပိကြော်၊ ဆေးလိပ်၊ ဆေးပေါ့လိပ်လေးတွေနဲ့ ၂ ပတ် တခါ တွေ့ကြရပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ တရားဝင် ငွေ ကိုင်ခွင့်မရှိပါ၊ ဒါကြောင့် ဆေးလိပ် (ဝါ) ဆေးပေါ့လိပ်ဟာ ငွေ ဖြစ်လာတယ်။ ရာဇဝတ် အကျဉ်းသားတွေဟာ မိမိတို့ရလာတဲ့ ထောင်ဝင်စာတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ အစားအစာတွေ၊ ဆေးလိပ်တွေနဲ့ လုံချည်ပြာတွေကို ပူဇော်ပါမှ နေပူထဲတွင် လုံချည်ပြာတွေရဲ့ မတရားမောင်းနှင် စေခိုင်းတဲ့ဒဏ်ကနေ သက်သာရာရပါတယ်။
ထောင်ဝင်စာ မတွေ့နိုင်သူ၊ ခိုကိုးရာမဲ့နေသူ အကျဉ်းသားတွေအဖို့တော့ တရိစ္ဆာန် တကောင်အလား
အမောင်းခံရဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အကျဉ်းသားတယောက်ကို မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတဲ့ လုံချည်ပြာ တယောက်ဟာ အဲဒီအကျဉ်းသားကို လက်ညိုးထိုးပြီး တခြား လုံချည်ပြာတယောက်ကို ဆေးပေါ့လိပ် ၁ဝဝ၊ ၂ဝဝ၊ ၃ဝဝ စသည်ဖြင့် လက်လွှဲရောင်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ အကျဉ်းသား မှန်မှန် လက်ခံရရှိတဲ့ ပမာဏ ထောင်ဝင်စာပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးသတ်မှတ်ကြတယ်။
ကျနော် အရှေ့ဖက် အပိုင်း(၁)နဲ့ အပိုင်း(၂)မှာ အိမ်အတွက် ငွေချေ: ခြင်း (Mortgage), Sub-prime, Secondary Market, Stock & Bonds တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့သလို အရင်းရှင်စီးပွားရေး စနစ်ဟာ ဟိန္ဒြူ(ဇာတ်) လိုပဲ စီးပွားရေး အဆင့်အတန်းကို လိုက်ပြီး (ဇာတ်)သဖွယ် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်ဆုံး အပိုင်းမှာ ဘာကြောင့် ဒီ Sub-prime ဈေးကွက်စခဲ့တဲ့ Housing Market အိမ်အဆောက်အဦ ဈေးကွက် ပြဿနာဟာ Financial Sector လို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍကိုပြန့်နှံ့သွားပြီး တကမ္ဘာလုံး ပွက်လောရိုက် သွားရတာလဲ? အမေရိကန် အစိုးရဦးဆောင်တဲ့ တကမ္ဘာလုံးက အစိုးရတွေ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာနဲ့ အဆုံးသတ်ပါရစေ။
ဒီအပိုင်းက အရှုပ်အထွေးဆုံးမို့ သည်းခံပြီး ဖတ်ရှုစေချင်တယ်။ ဒီ သပွတ်အူ လိုရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ပြဿနာကိုမဆွေးနွေးခင်မှာ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့(မူ)တခု ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အဲဒါက အရင်းရှင်လောကမှာ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်ငွေ(အားလုံး)ကို ရင်းနှီးပြီး လုပ်ငန်းမလုပ်ရဘူး။ ဥပမာ - ကျနော့်မှာ ငွေ(၁၀)သိန်းရှိတယ်။ဘ၀င်မြင့်ပြီးစက်ရုံတခုကိုငွေ(၁၀)သိန်းလုံး ရင်းပြီး တည်ထောင်ခဲ့လို့ ရှုံးရင် ကျနော်ခံရပြီပေါ့။ အရင်းရှင်စနစ်မှာ (ရှုံးနိုင်တယ်) ဆိုတဲ့ အန္တရာယ်(Risk) ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ငွေ(၁၀)သိန်း ထဲက မိမိငွေ(၂)သိန်း ကိုရင်း၊ ကျန်(၈)သ်ိန်းထဲက တချို့ကို Stocks & Bonds တွေဝယ်၊ တချို့ကို ရွှေဝယ်။
တချို့ကို ငွေဖော်လွယ်တဲ့ Money Market ထဲမှာထားပြီး ထုခွဲနိုင်တဲ့ မိမိပိုင်ဆိုင်မှု(Assets) ကိုပြ၊ မိမိရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပလင်(Plan)ကိုပြပြီးဘဏ်တွေမှာငွေခြေးပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်ရပါမယ်။ ဘဏ်တွေကလည်း ဘဏ်တခုတည်းကနေ ကိုယ်လိုသလောက် အားလုံးကိုမချေးလိုက်ပါ။ (ငွေများရင်) ဘဏ်တွေစုပြီးမှ ချေးပါလိမ့်မယ်။ Spread the risk ဆိုတဲ့ ရှုံးနိုင်မှု အန္တရာယ်ကို မျှဝေခံကြတာပါ။ ဒါဟာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလို့ပြောရပါမယ်။ ဒီလို မိမိရဲ့ ဥစ္စာဓနကို ပြပြီး နည်းနည်း ရင်းပြီး များများချေးတာကို Leverage လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အရင်းရှင်စနစ်မှာ ဖြစ်နိုင်သလောက် Leverage လုပ်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒီတွေးခေါ်မှုဟာ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အဓိက Principle ခံယူ(မူ) ဟုယူဆနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အရင်းရှင်စနစ်ဟာ ဒီ Leverage လုပ်တာ(လွန်) သွားလို့ ခုလို စီးပွားရေး ဒုက္ခနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာပါ။
(၂) Mortgage Companies တွေကငွေချေးတယ်
(၃) တခါ Mortgage Companies တွေက GSEs ( Fannie May, Freddie Mac, Ginne Mac, Ginne Mac) စတာတွေ နဲ့ ဘဏ်(Banks) တွေကို ချေးထါးတဲ့ချေးငွေ (Loans) တွေကိုစုပြီး လက်ကားရောင်းလိုက်တယ်။
(၄) တခါ ဒီGSE နဲ့ ဘဏ်တွေက တခါစုပြီး MBS Mortgage back Securities ( MBS), CDOs & CMOs အဖြစ်
ပြန်ရောင်းပြန်တယ်။ဒီဟာတွေကို (Assets-Backed Securities) လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဟာတွေဟာပိုင်ဆိုင်မှု Asset တခုစီက (၀င်ငွေ) ကို အခြေပြုပြီး၊ ဒီ Asset တွေကို ကျောထောက်နောက်ခံ လုပ်ထားတာကြောင့် Assets-Backed Securities လို့ခေါ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ရှုပ်မှာစိုး၍ CDOs နဲ့ CMO ကိုမရှင်းတော့ပါ ငွေကြေးစာချုပ် Bonds အဖြစ်သာ နားလည်ထားပါ- စာရေးသူ)ဒီ ငွေကြေးစာချုပ်Bondဈေးကွက်ပွဲစားလုပ်ပေးသူတွေက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ် Investment Banks တွေပါ။ အမေရိကန်အရင်းရှင်စနစ်မှာ စတော့နဲ့ငွေချေးစာချုပ် (Stocks&Bonds)တွေကိုဝယ်ရင် Brokerage လို့ ခေါ်တဲ့ပွဲစားတွေဆီမှာ ရောင်းဝယ်ရပါတယ်။ ဒီ ပွဲစား တွေမှာ စာရင်း (Account) ဖွင့်ပြီး ရောင်းဝယ်ရပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ် Investment Banks တွေမှာ Brokerage Arm လို့ခေါ်တဲ့ ပွဲစားလုပ်တဲ့ အပိုင်းဌာနတွေ ရှိကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ တကမ္ဘာလုံးက ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေ (Independently Wealthy People)၊ ဘဏ်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးက အမေရိကန်မှာ အိမ်ယာဈေးကွက်တဟုန်ထိုးအားကောင်းနေတယ်ဆိုပြီး ဒီ MBS ကဲ့သို့ Asset-based Securities တွေကို နင်းဝယ်ကြပါတယ်။ အိမ်ယာဈေးကွက်ကလည်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပိုင်း အစလောက်က စလိုက်တာ၊ လေးနှစ် ငါးနှစ်လောက် အိမ်ဈေးတွေဆက်တက်နေတော့ သတိလျော့လာကြတာပေါ့။
လူ ဆိုတာ လောဘ သားတွေဖြစ်တာကြောင့် ဒီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်တွေဟာ MBS တွေကို တခြား Asset Based Securities တွေနဲ့ရောပြီး တခါ ရောကြော် ငွေကြေးစာချုပ် တွေကို အသစ် ထုတ်ရောင်းပြန်ရော။ ဒါကို(Puree)ရောမွှေလိုက်တယ် လို့ သုံးကြပါတယ်။
အရင်းရှင်စနစ်မှာ “၀င်ငွေ” ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ၀င်ငွေ ရှိရင် ဒီဝင်ငွေ (ငွေသား) အပေါ် မူတည်ပြီး Financial Vehicles လို့ခေါ်တဲ့ ငွေရပေါက်တွေထွင်ပြီး ပြန်ရောင်းပြီး ငွေရှာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့လို စားသုံးသူ တွေက အိမ်ဝယ်တယ်၊ ကားဝယ်တယ်၊ “ဗီဇာ” အကြွေးဝယ်ကဒ် သုံးတယ်ပေါ့။ ဒီဟာတွေအားလုံးက ငွေချေးသုံးတာပါပဲ။ ငွေချေးရင် လစဉ်မှန်မှန် ဘဏ်တွေကို အရစ်ကျ ပြန်စပ်ရတယ်ပေါ့။ ဒါကိုချေးတဲ့ ဘဏ် တွေအတွက် Cash Flow ငွေသားစီးဆင်းမှု လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဝင်ငွေရှိတဲ့၊ ငွေသားစီးဆင်းမှုရှိတဲ့ ချေးငွေကို စုပြီး ဘဏ်တွေက Securities လို့ခေါ်တဲ့ Bonds တွေပြန်ထုတ်ရောင်းတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကားချေးငွေ၊ မာစတာကဒ်၊ ဗီဇာကဒ် ချေးငွေတွေလည်း ငွေကြေးစာချုပ် (Bonds) အဖြစ်ပြန်ရောင်းစားကြပါတယ်။
ဒီမှာ ဘာကို ပြန်ရောင်းတာလဲ ဆိုတာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ငွေချေးရင် အတိုး(Interest) ပေးရတယ်။ အမှန်က အတိုးကိုပြန်ရောင်းစားပြီး ပြန်ငွေရှာ၊ ဒီငွေနဲ့ ပြန်ဝင်ငွေဖော်တဲ့ စနစ်ပါပဲ။ ဥပမာ - ကျနော်တို့ အိမ်ဝယ်ရင် (၇% -၈%) အတိုးပေးရပါမယ်၊ ကားဆိုနည်းနည်းပိုပေးရပါမယ်။ ဗီဇာ ဆိုရင် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိပေးရမယ်ပေါ့
(မှတ်ချက် - အတိုးကချေးသူရဲ့ ငွေချေး-ငွေပြန်ဆပ်တဲ့ ရာဇ၀င် Credit History ပေါ်မူတည်ပါတယ်) ဒီအတိုးများကို စုပြီး အတိုးကို ပြန်ရောင်းစားကြတာပါ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ပေးရတာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း အတိုး ဆိုပါတော့ ကျနော်တို့ကို ချေးတဲ့သူက ၀န်ဆောင်မှုအတွက် ၂ ရာခိုင်နှုန်းယူ အတိုးစားပြီး ၈ ရာခိုင်နှုန်းအတိုးကို ပြန်ရောင်း၊ တခါ နောက်တဆင့် လူကို ၆ ရာခိုင်နှုန်း အတိုးနဲ့ ပြန်ရောင်းပြီး ငွေပြန်ရှာ၊ ငွေပြန်လှည့်ကြတာပါ။ တဆင့်မှာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းစားတယ်ဆိုပေမည့် ငွေရင်းပမာဏက သန်းပေါင်းမြောက်များစွာ၊ ဘီလီယံပေါင်းမြောက်များစွာဆိုတော့ ၀င်ငွေ အများကြီးရကြတာပေါ့။
ဒီတော့ အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ငွေကြေးစာချုပ်တွေက အိမ်သက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်တွေကတဆင့် ထုတ်တဲ့၊ ရောသမမွှေ Assets Based Bonds တွေထဲပါကုန်ပြန်တယ်။
ဘယ်သူတွေ ၀ယ်ကြမလဲ အရင်းရှင်စနစ်ဆိုတာ အရင်း “ငွေ“ ကို အခြေခံတာကြောင့် ငွေကို မအိပ် စေရပါ။ ဒါကြောင့် ငွေရှိရင် “၀င်ငွေ” ရှိ အောင် “တိုးပွား” အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ငွေရှိသူတိုင်း ဒီ ငွေကြေးစာချုပ်တွေကို ၀ယ်ကြပါတယ်။ စက်တင်ဘာ လထဲမှာ အမေရိကန်အစိုးရဟာ Fannie May နဲ့ Freddie Mac ကို သိမ်းယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ GSEs (၂) ခုရဲ့ စာချုပ်တွေကို အများဆုံးဝယ်ထားတာက တရုတ်အစိုးရနဲ့ ဂျပန်အစိုးရပါ။ တရုတ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတွေရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြည်ပပို့ကုန် (Export) ဟာ သွင်းကုန် (Import) ထက်များတာကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ ကုန်ကူးကြရာမှာ (ငွေပို) ရှိနေကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဘက်က ကြည့်ရင် ကုန်သွယ်လိုငွေ Trade Deficit ပေါ့။
တရုတ်နဲ့ ဂျပန်က ဒီ ပိုငွေတွေကို ငွေကြေးစာချုပ်တွေဝယ်ပြီး “အတိုး” ရအောင် တိုးပွားအောင် လုပ် ကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ အီရတ်မှာ တလ ၁၀ ဘီလီလျံ၊ (သန်းတသောင်း) သုံးနေပါတယ်။ ဒီငွေတွေ ကို နအဖ စစ်အစိုးရလို၊ လိုသလောက် ၀ါဇီက ရိုက်ထုတ်လို့ မရပါဘူး။ ငွေချေးရပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရက ချေးဖို့ထုတ်တဲ့ ငွေကြေးစာချုပ်ကို Treasury Bonds လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရအတွက် “၀င်ငွေ” ဟာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေဆီက ကောက်လို့ရတဲ့ အခွန်တော် Tax ပါပဲ။ ဒီ Treasury Bonds တွေကို အများဆုံးဝယ်ယူထားသူတွေဟာ ဂျပန်၊ တရုတ်နဲ့ ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
နယူးရောက်တိုင်းမ်မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးတခုမှာ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်က ဆေးရုံတခုဟာ အသစ်တိုးချဲ့ဖို့ ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြုထားတယ်။ အဆောက်အဦ ဆောက်ဖို့၊ ပါမစ်ယူတာနဲ့ ဆောက်တာ အားလုံး ၂ နှစ်လောက် ကြာမယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ငွေတချို့ကို ဘဏ်တိုးမစားတော့ဘဲ MBS Bonds တွေ ၀ယ်လိုက်မိတယ်။ အိမ်ဈေး တွေ ထိုးကျတော့ ဒီအိမ်ကို အာမခံထားတဲ့ စာချုပ်တွေဟာ တန်ဖိုးကျကုန်တော့ သန်း ၃၀၀ မရှိတော့ဖူးပေါ့။ ဆေးရုံလဲ ဒုက္ခတွေ့ရတာပေါ့။
ဒါကြောင့် ငွေရှိတဲ့သူအများဟာ “အိမ်” တွေကို အာမခံရှိတယ်ဆိုပြီး ဒီ စာချုပ်တွေ ၀ယ်ထားမိတာ။ အိမ် ခြံ မြေ ဈေး ကွက်ပျက်သွားတော့ ဒီ စာချုပ်တွေဟာ သာမန် စက္ကူ စာရွက်တွေ ဖြစ်သွားတော့။ ဒါကြောင့် တကမ္ဘာလုံး ဘယ်လောက်အရှုံးပေါ်ကြ မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်တာပေါ့။ နောက်တဆင့် Leverage လုပ်ကြရအောင် အရင်းရှင်စနစ်မှာ နည်းနည်းအရင်းဆိုက်ပြီး များများချေး (သို့မဟုတ်) များများအမြတ်ရအောင် လုပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် “ငွေ” ရှိ ရင် ဒီ ငွေ ကို ပြပြီး Leverage လုပ်ကြရမယ်။
စတော့ နဲ့ ဘွန်းစာချုပ်တွေကတော့ ဟုတ်ပြီ။ ဒါတွေကို ဒီအတိုင်းထားမှာလား? ဒါတွေကို “ဘန်း” ပြပြီး ငွေ ထပ်မရှာ နိုင်ဖူးလား? ပစ္စည်းတခု (A) ကနေ (B) ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရင် (Derive) လုပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရှိပြီးသား (Finances Instruments) ကနေ ထပ်ဆင့် ငွေဖော်ထုတ်တာကို Derivatives လို့ ခေါ်ပါတယ်။
( ဒီ Derivative ဆိုတာ အင်မ တန် ရှုတ်ထွေးပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် All About Derivatives by Michael Durbain စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။)
ကျနော် လွယ်လွယ် ဥပမာတခုကို ကြည့်ရအောင်။ ဥပမာ Cisco စတော့ရှယ်ယာတခုဟာ ၂၄ ဒေါ်လာ ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီ Cisco စတော့ကို ၀ယ်ချင်ရင် ၂၄ ဒေါ်လာပေးမှ စတော့ တခု ရမယ်။ ငွေနဲ့ရင်းရမယ်ပေါ့။ Cisco စတော့ ၁၀၀ ၀ယ်ချင်ရင် ဒေါ်လာ ၂၄၀၀ ရှိမှ ၀ယ်နိုင်တယ်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့။ အကယ်၍ ကျနော်က Cisco မှလုပ်တဲ့သူဖြစ်၍ ၄င်း Cisco စတော့ အတက်အကျ ကို လေ့လာထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူမို့ ဒီ Cisco စတော့ အတက်အကျပေါ်မူတည်ပြီး ငွေရှာချင်တယ် ဆိုပါစို့။ Cisco ရဲ့ လုပ်ငန်း ၊ P/E ratio ကို ကြည့်ပြီး ယနေ့ စတော့ ဈေးဟာ ၂၄ ဒေါ်လာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ မုချဈေးတက်မယ်လို့ထင်ခဲ့ရင် ကျနော်က ၂၄ ဒေါ်လာဈေးနဲ့ စတော့ ၁၀၀၀ ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ ရင်းပြီး ၀ယ်လိုက်မယ်၊ စတော့ ၁၀၀၀ ကိုင်ထားမယ်ပေါ့။ အဲသလိုကနေ Cisco စတော့ဟာ (၆ လအတွင်း) တခုကို ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်ခဲ့ရင် တခုကို ၆ ဒေါ်လာမြတ်ပြီဖြစ်လို့ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ အမြတ်ထွတ်သွားပြီပေါ့။
ကောင်းပြီ။ ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ မရင်းဘဲ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ မြတ်အောင်လုပ်လို့ မရဖူးလား? ရတယ်။ ဒါကို Option Contract လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Cisco စတော့ ၁၀၀၀ ကို ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ ရင်းပြီး ၀ယ်မဲ့အစား
(၆ လ)အတွင်း Strike Price (၂၄) နဲ့ ၀ယ်နိုင်ခွင့် Call Option ကိုပဲ ၀ယ်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိတခု ပြုစေချင်တာက “၀ယ်ခွင့်” ကို “၀ယ်”တာ။ ၀ယ်ရမယ် မဆိုလိုဘူး။ အကယ်၍ (၆ လ) မှာ Cisco စတော့ဟာ
တခုကို ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်က Cisco စတော့ ကို တခု ၂၄ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ပြီး အမြတ်စားရုံပဲ။ ဒီ Option ကို ဒိုင်ဆီကပဲ ၀ယ်ယူရပြန်တယ်။ ၀ယ်ရင် Call Option ကို ၀ယ်နိုင်သလို ရောင်းရင် Put Option ကိုလဲ “၀ယ်” နိုင်ပါတယ်။
ပိုရှုပ်စေတာက ဒီ Derivative တွေဟာ “ဒိုင်” မှာ ရောင်း၊ ၀ယ်နိုင်သလို ၂ ဦး၊ ၂ ဘက် ကန်ထရိုက် ချုပ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ Derivatives ဆိုတာ လောင်းကစားဆန်လာပြီး လွန်စွာ ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှစ်များမှာ ငွေရွှင်လာကြတဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ ဗရာမင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်တွေဟာ အထိန်းအကွပ်မရှိ ဒီ Derivatives တွေကို ကစားလိုက်ကြတာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ပေါက်ကွဲမှု
ဖြစ်တော့ သောက်သောက်လဲ ရှုံး ကြတော့တာပေါ့။ ရှုံးကျတော့ မိမိတို့ ထုတ်ရောင်းထားတဲ့ Assets Back Bonds တွေကိုလဲ ဈေးအကျမှာ တန်ဖိုးမရှိကြ တော့။ တသီတတန်းကြီး အဆင့်ဆင့်ရှုံးကျတော့ ဘဏ်တွေက Assets တွေကို ငွေပြန်မဖော်နိုင်တော့ခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ငွေသားကို ထုတ်မချေးတော့ဘဲ ငွေသားကိုင်ထားကြတော့ Credit Crunch ကတဆင့် “ငွေ” လည်ပတ်မှုအားနည်းတာ၊ လုံးဝငွေမလည်တော့တာတွေ ဖြစ်တာပေါ့။
ဘဏ်အချင်းချင်းလည်း ငွေမချေးကြတော့ ပြည်သူတွေကိုလည်း ငွေမချေးနိုင်ကြတော့ပြည်သူတွေလည်းကားလည်း မ၀ယ်နိုင်၊ အိမ်လည်း မ၀ယ်နိုင်တော့ တပြည်လုံးရောင်းအားကျပြီး စီးပွားရေးတခုလုံး “တန့်” ကုန်တော့ လူတွေလည်း အလုပ်ပြုတ်၊ အရောင်း “တန့်” ပြီး စီိးပွားရေးကပ် Depression အထိ ဆိုးရွားသွားနိုင်ပါတယ်။ မော်တော်ကားတစီးဟာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ဓာတ်ဆီကုန်သွားရင် ထိုးရပ်သွားသလို အရင်းရှင်စနစ်မှာ စီးပွား ရေးမဏ္ဍိုင်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ငွေလည်ပတ်မှုမရှိရင် စီးပွားရေးယန္တရားတခုလုံး ရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတခါ ပြဿနာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ဆိုးရတာလဲ?
အရင်ခေတ်တွေတုန်းကလဲ Boom & Bust ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခုမှ ဘာကြောင့် အဆိုးဆုံးဖြစ်ရတာလဲ? စီးပွားရေးမှာ ကဏ္ဍတွေ ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကဏ္ဍ Manufacturing Sector, အဆင့်မြင့်နည်းပညာ ကဏ္ဍ High Tech Sector ၊ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍ Financial Sector စသည်ဖြစ်ပေါ့။ အရင်တုန်းက Boom တွေက High Tech – IT/ Computer/ Communications Sector မှာ Boom ဖြစ်တယ်။ Investment Banks တွေ ဘဏ်တေကွ၊ ဒီ Sector မှာရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ငွေရင်းရှာပေးတာ၊ ငွေချေးတာပဲ ရှိတယ်။ Bust ဖြစ်တော့ သူတို့လက်ထဲမှာ ငွေရှိတယ်။ နဲနဲပါးပါးရှုံး တာပဲ ရှိတယ။် သူတို့ Sector ကို မထိခိုက်ဖူး။
ဒီ Housing Boom ဖြစ်တော့ အိမ် ခြံ မြေလောက၊ က အောက်ဆုံးအဆင့်။ ဒီ အိမ်ခြံမြေရောင်းအားတဟုန်ထိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို အခြေပြုပြီး Financial Sector မှာရှိတဲ့ Investment Banks, Commercial Banks တွေနဲ့ Insurance Companies ကြီးတွေပါ ၊ပါဝင်ရှုပ်ထွေးလာတာအပြင်ငွေရှာပေးတဲ့၊ ငွေလည်ပတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွောဖြစ်ခဲ့ရင် အာမခံပေးတဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေပါ ပါဝင်ရှုပ်ထွေးလာတာကြောင့် အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး (ဗရာမင်)တွေ ထိတာ ကြောင့် ဘဲ၊ မတတ်သာဘဲ အရင်းရှင်စနစ်မပျက်စီးရအောင် အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရက ၀င်ကယ်ရ တော့တာပဲ။
Wall Street လောဘသားများ လက်ရှိပြဿနာဟာ လောဘကြောင့်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ဝေါလ်စထရိရဲ ကျင့်ထုံး (သို့) Culture ယဉ်ကျေးမှုကြောင့် ပိုအစွန်းရောက်တယ်ဆိုရင် ပြောလုိ့ ရနိုင်စရာရှိပါတယ်။ IT Boom တုန်းက လူတော်တွေကို ဆွယ်ချင်တော့ လခအပြင် Stock Option ဆိုတာပါ ငှားရမ်းခအနေနဲ့ ပေးရပါတယ်။ Stock Options ရဲ့ သဘောက မိမိကုမ္ပဏီ Stock ဈေးတက်ရင် မိမိလဲ ချမ်းသာမှုပိုတာကြောင့် အလုပ်သမားတွေ ပိုအလုပ်လုပ်ရအောင် မက်လုံး Incentive ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ထိပ်ဆုံးက ကုမ္ပဏီအရာရှိကြီးတွေက လောဘထွက်ပြီး Enron တို့လို စာရင်း Accounting ကို လိမ်ပြပြီးStock ဈေးတက်အောင်လုပ်တဲ့ မသမာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ Wall St ရဲ့ ထုံးစံက အမြတ်ပေါ်မှာ ဘောနပ်စ် အပိုဆုပေးတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံးကြပါတယ်။ နှစ်ကုန်ရင် Wall St မှာ ခရစ်စမတ်ဘောနပ်စ် ပေးတဲ့ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကရတဲ့ အမြတ် အစွန်းရာခိုင်နှုန်းတခုကို အကောင်းဆုံးအလုပ်သမားတွေကို အပိုဆု Bonus ပေးပြီး ဆွဲဆောင်တဲ့အကျင့် ယဉ်ကျေးမှုပါ။ အပိုဆုက ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီပြီး ရကြတာပေါ့။ စုစုပေါင်းရင် Billions နဲ့ချီပြီး Bonus ပေးတာပေါ့။
Wall St Trader တယောက် ဟာ ၁၀ သန်း- သန်း ၂၀ အထိ ရကြပြီး CEO တွေဆို သန်း ၄၀ ကနေ- သန်း ၁၀၀ အထိ ရကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုတွေ တဟုန်ထိုးတက်ချိန်မှာ မသမာတဲ့၊ တရားမ၀င်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ငွေရှာတယ်။ အမြတ်ရပြီးရောဆိုပြီး စွပ်စွဲပြောကြားကြရုံမက တချို့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို FBI က ၀င်ရောက်စစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ မကြာခင်ကဒေ၀ါရီခံကဲ့ရတဲ့ Lehman Brothers ရဲ့အရာရှိချူပ်(CEO)ဟာ(၆)နှစ်အတွင်းဝင်ငွေသန်း(၄၈၀)လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။Wall St ရဲ့တရားမဲ့တဲ့သာဓကတွေပါ၊
အမေရိကန် အရင်းရှင်စနစ်မှာ Insurance အာမခံကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ (ဗရာမင်) စစ်စစ်ကြီးတွေပါ။ ရာစုနှစ်နဲ့ချီ ပြီး ငွေစုကာ ငွေပုံမှာ ထိုင်လာတဲ့အပြင် လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ် ၊ အရှုံး(Risk) ယူပြီး လုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ အမြတ်ရအောင် လုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ထို့အပြင် အစိုးရ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အရ အရင်က အာမခံကုမ္ပဏီတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဘဏ်၊ စီးပွားရေးဘဏ် တွေကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အရ ခွဲခြားထားပါတယ်။ ခု Deregulation - ထိန်းသိမ်းကန့်သတ်မှု ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ (Deregulation)ခေတ်မှာ ဒီဟာတွေက ရောကုန်ပါတယ်။
အရင်းရှင်စံနစ်မှာ ဈေးကွက်က အရာရာကို ဖန်တီးထိမ်းကြောင်းမယ် လို့ ယူဆကြပေမယ့် ကုမ္ပဏီကို “လူ” သားတွေကပင် ဦးစီးကြရတာမို့ လွန်ကျွံမှုမရှိစေရန် အစိုးရက အများအကျိုးအတွက် ဥပဒေများထုတ်ကာ ထိန်းကွပ်၊ ထိန်းကျောင်း Regulate လုပ်ပေးရတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရဟာ Deregulation လို့ခေါ်တဲ့ ထိန်းကွပ်မှုကို လျှော့ပေးရုံမက ထိန်းကွပ်မှု စံနစ်ဟာလဲ ခေတ်နောက်ကျလျှက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - ပြည်နယ်တိုင်းမှာ အာမခံကော်မရှင် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ဒီပြည်နယ်အရာရှိတွေက ၎င်းပြည်နယ်သားတွေ မနစ်နာစေဖို့ ယင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ စီးပွားရေး လာလုပ်တဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီတွေကို ထိန်းကွပ် ပေးရတယ်။ ၁၉၄၅ ဥပဒေအရ ဖက်ဒရယ်အဆင့်မှာ ထိန်းကွပ်မှု မရှိပါ။ ဒီပျော့ကွက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အာမခံ ကုမ္ပဏီကြီးတွေက Housing Boom မှာ ၀င်ကစားကြရာက တချို့ ဒေ၀ါလီခံရလု ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
အာမခံကုမ္ပဏီဒေ၀ါလီခံရရင် လမ်းပေါ်က ပြည်သူတွေရဲ့ အာမခံကို ဘယ်သူတွေက လာလျှော်ပေးရမှာလဲ? ကားတိုက်ရင်၊ အိမ်မီးလောင်ရင်၊ ဘယ်သူက ငွေလာလျှော်မှာလဲ? အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေကိုပါ လာထိကုန်ပြီကော?
စက်တင်ဘာလ အကုန်မှာ အမေရိကန်အစိုးရက ၀င်ကယ်ခဲ့ရတဲ့ အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ AIG ရဲ့ အဖြစ်ကို
ကြည့်ရအောင်။ AIG ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးအာမခံ ကုမ္ပဏီတခု။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၃၀) မှာ အလုပ်သမား တသိန်းကျော်ကို အလုပ်ပေးထားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထရီလီယံ ပမာဏ– ငွေလည်ပတ်မှု Balance Sheet ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တယ်။ Balance Sheet ဆိုတာ ၀င်ငွေ၊ ထွက်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အကြွေးပေးစရာ ငွေသားလက်ကျန် တွေကို ပြတဲ့ ဇယားဖြစ်တယ်။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးကို ဒူးထောက်ကျသွားပြီး အမေရိကန်အစိုးရက ၈၅ ဘီလီယံ ထုတ်ချေးပြီး ၀င်ကူရတဲ့ အထိ ဖြစ်အောင် ဒုက္ခပေးခဲ့တာက လူ ၃၇၇ ယောက်သာရှိတဲ့ လန်ဒန်မြို့မှာ အခြေပြုတဲ့ AIGFP ဆိုတဲ့ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီလေးကြောင့် ဖြစ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ကျော်ကျော်လောက်က JP Morgan ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက လူငယ်လေးတွေ ဦးစီးပြီး Credit Default Swaps – CDS လို့ခေါ်တဲ့ Derivative အသစ်ကို တည်ထွင်ခဲ့တယ်။ CDS ရဲ့ အခြေခံက Risk ရှုံးနိုင်မှုကို လက်လွဲယူ (အာမခံ) ပြီး ငွေရှာတာပဲ။ ဥပမာ ကုမ္ပဏီတခုက Bonds (၁) သန်းဖိုး ၀ယ်ထားတယ်။ ရှုံးမှာစိုးလို့ ကျနော့်ကို (၉၀၀,၀၀၀) တန်ဖိုးနဲ့ ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ်ဖြစ်စေ အချိန် အကန့်အသတ်နဲ့ ရောင်းတယ်။
ဒီ (၁) နှစ် (၂) နှစ် အတွင်းဘာမှ မဖြစ်ရင် ကျနော်က ဘာမှ မရင်းဘဲ ၁ သိန်းမြတ်ပြီပေါ့။
ဒါထက်အများကြီး ရှုပ်ထွေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖြင်းကတော့ စွန့်စား အာမခံပြီး ငွေရှာတာပါ။ တနည်းအားဖြင့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လောင်းကစားခြင်း တမျိုးပါပဲ။ J.P Morgan ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အရ AIGFP က CDO ဆိုတဲ့ Bonds တွေကို “အာမခံ” ဖို့ CDS စာချုပ်တွေ လက်ခံရောင်း/၀ယ် ပါတော့
CDO ၀ယ်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေ ငွေချေးဌာနတွေက မိမိတို့ ရင်းနှီမှုတွေအတွက် “အာမခံ” ရှိပြီ။ နောက် အစိုးရတွေရဲ့ ထိန်းကွပ်မှု Regulation အရ ၁၀ သန်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြထားရင် ရာခိုင်နှုန်းတခုကို အာမခံအနေနဲ့ ဖယ်ထားရပါတယ်။ ဒီအာမခံဝယ်လိုက်တဲ့ အတွက် ဖယ်ထားတဲ့ ငွေတွေ လွတ်လပ်ပြီး ထပ်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ တဆင့်ပြီး တဆင့် leverage လုပ်ငွေရှာခြင်းပါ။ (၄), (၅) နှစ်အတွင်း ဒီ AIGFP ဌာနခွဲ ကုမ္ပဏီလေးဟာ AIG ၀င်ငွေရဲ့ ၄% ငွေရှာပေးရာကနေ ၁၇.၂ % အထိ ကြီးထွားလာပါတယ်။ ဒီ AIGFP ရဲ့ ၀င်ငွေရဲ့ ၄၅% ကို အလုပ်သမားတွေကို Bonus အနေနဲ့ ပြန်ဝေပေးရာ လူတိုင်း သန်းနဲ့ ချီပြီး အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ဈေးတွေ ပြုတ်ကျတော့ ဒီ Bonds တွေကလဲ ဈေးကျရော အာမခံကြေးတွေပေးရတာပဲ ၁၅ ဘီလီယံကုန်ကျတော့ AIG ရဲ့ စတော့တန်ဖိုးတွေ ပြုတ်ကျတော့ ၎င်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို မထုခွဲနိုင်ခင် ငွေမလဲဘဲ ဒေ၀ါလီခံရစရာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၃၀) မှာ လူတသိန်းကျော် အလုပ်ပြုတ်သွားပြီး ဆက်တိုက် ကုမ္ပဏီတွေ ဒေ၀ါလီခံရနိုင်စရာရှိတာကြောင့် အမေရိကန် အစိုးရက ၈၅ ဘီလီယံ ချေးပြီး AIG ကို ၀င်ကူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတခါ စီးပွားရေးလောကရဲ့ ဗရာမင်တွေရဲ့ ထိပ်သီး “အာမခံ” ကုမ္ပဏီတွေပါ ဒီတချီ ထိခိုက်လာပါတယ်။
ဥပမာ လေယာဉ်ကုမ္ပဏီတခုဟာ ဓါတ်ဆီ မ၀ယ်ဘဲလေယာဉ်ပျံ၍ မရပါ။ ဓါတ်ဆီဈေးတွေကလည်း တောက်လျှောက်တက်နေရင် တက်မယ့် အရိပ်ရှိရင် ကြိုဝယ်ပြီး ကာကွယ်တာကို Hedge လုပ်တယ် ခေါ်ပါတယ်။
Mutual Fund ဆိုတာက အများလူထုက ပါဝင်ပြီး ဒီငွေစု ကရလာတဲ့ “အရင်း” ငွေနဲ့ Stocks & Bonds တွေဝယ်ပြီး တိုးပွားအောင် လုပ်တဲ့ Funds တွေပါ။ ဒီ Funds တွေမှာ အများလူထု public ရဲ့ ရေရှည်အတွက် စုထားတဲ့ 401 (k) ပိုက်ဆံတွေပါဝင်တာကြောင့် အစိုးရက ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ထိန်းကွပ်မှု Regulation တွေရှိတယ်။ Speculators တွေဆိုတာကတော့ ရှေ့မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလားလာကို ချိန်ပြီး စွန့်စားပြီးငွေရှာတာပါ။
Short ဆိုတာက Stocks တွေ ဈေးအကျမှာ ငွေဖော်တာပါ။ ဥပမာ - ကျနော်က Cisco စတော့ ၁၀၀၀ ကို ၁၀၀ ဈေးနဲ့ ၀ယ်ထားတယ်။ ဒီ ၃ လပတ်ကြေငြာစာတမ်းမှာ Wall Street ကမှန်းထားသလို မအောင်မြင်လို့ Stock တွေ ဈေးကျတယ်။ ကျနော်က ၁၀၀ နဲ့ ၀ယ်ထားတာ တပ်မက်ပြီး ပြန်မရောင်းချင်ဘူး။ ကိုင်ထားမယ်ပေါ့။ ကျနော့်စတော့က ကျနော့်ဆီမှာ ရှိတာမဟုတ်။ ကျနော့် စတော့ပွဲစား Brokerage မှာ အပ်ထားရတာ။
Hedge Funds နဲ့ Speculators တွေက ကျနော့်လို ငတုံးတွေ အပ်ထားတဲ့ Brokerage ကိုသွားပြီး Cisco ဈေးကျတော့မယ်။ ငါ့အတွက် စတော့ “တသိန်း” ကို ၉၈ ဒေါ်လာ ဈေးနဲ့ရောင်းလိုက်ပါဆိုပြီး ရောင်းခိုင်းတယ်။ Brokerage ကလဲ ကျနော့်စတော့ ၁၀၀၀ အပါအ၀င် စတော့ တသိန်းကို ရောင်းလိုက်တယ်။ ဥပမာ Cisco စတော့က ဒေါ်လာ ၈၀ အထိကျသွားတော မှပြန် ၀ယ်ပြီး ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့ မသိလိုက်ပါ။ ချစ်တီးတွေက ဒီ(အကျ)မှာ ငွေ ၁၈ သိန်းမြတ်သွားတယ်။ ကျနော့် စတော့ပွဲစားကလည်း ခဏလက်လွှဲခ မြတ်မြတ်လေးရလိုက်တယ်ပေါ့။ အဲ Cisco စတော့က ၀ုန်းဆို ဒေါ်လာ ၁၁၀ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ချစ်တီးတွေ အရှုံးနဲ့ ပြန်ဝယ်ပေးရတာပေါ့။ Stock ကို ခေတ္တငှားပြီး အကျကိုကြိုတွက်ပြီးအရောင်းဝယ်လုပ်တာကို Short လုပ်တယ်ခေါ်ပါတယ်။ Stock အတက်ရော၊ အကျပါ ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အန္တရာယ် Risk ကတော့ များတာပေါ့။
အခုလို ကုမ္ပဏီတွေ ဒုတ္ခရောက်နေချိန်မှာ Short Order များရင် ရောင်းအားများတာကြောင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ စတော့ တွေ ကျသင့်တာထက် ကျတတ်ပါတယ်။ စတော့တွေ ဈေးကျရင် Market Capitalization လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ တန်ဖိုးကျသွားပါတယ်။ ထုတ်ထားတဲ့ စတော့အရေအတွက်နဲ့ စတော့ရဲ့ တန်ဖိုးကို မြောက်ရင် အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ တန်ဖိုးရပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဒီတန်ဖိုးပေါ် မူတည်ပြီး ကုမ္ပဏီတွေ ငွေချေးရတာ။ ဒီချစ်တီးတွေကြောင့် ကုမ္ပဏီ စတော့ တွေ ဈေးကျရင် ကုမ္ပဏီတွေ ပို ဒုတ္ခရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် အစိုးရက ဘဏ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ (၇၉၉) ရဲ့ စတော့တွေကို ခေတ္တခဏ short မလုပ်ရဆိုပြီး ပညတ်ခဲ့ရတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့က အမေရိကန် လွှတ်တော်က လောလောဆယ်စီးပွားရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇၀၀ ကို သုံးစွဲဖို့ သဘောတူဥပဒေ တရပ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ် ပြဿနာက Credit Crunch လို့ခေါ်ပါတယ်။ တဖက်က အိမ်ဈေးတွေက ကျ၊ တဖက်ကလည် ARM အတိုးအရ၊ အတိုးကတက်တော့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေ လစဉ်ပေးရတဲ့ ပမာဏကတက် တော့ လစဉ်မှန်မှန် ငွေမသွင်းနိုင်ကြတော့ဘဲ ဘဏ်တွေက အိမ်တွေကို ပြန်သိမ်းခဲ့ရတယ်။ တခါဘဏ်တွေက လစဉ်ဝင်ငွေတွေအပေါ် မူတည်ပြီး leverage လုပ်ပြီး MBS Bonds တွေပြန်ရောင်းထား၊ ဒီ Bonds တွေက CDOs တွေထဲရောပါသွားတော့ မီးခိုးတောက်လျှောက် ဘဏ်တွေရဲ့ရင်းနှီးမှု investments တွေ ဒုတ္ခရောက်တော့ ဘဏ်တွေရဲ့စတော့ တွေ ထိုးကျတော့ ဘဏ်တွေက ကြောက်ပြီး ငွေမချေးတော့ပါ။ ရှိစုမဲ့စု ငွေကိုပဲ ကိုင်ထားကြပါတော့တယ်။
ဒီတော့ လုပ်ငန်းတွေ လည်ဖို့ ငွေလိုရင် ငွေမရှိတော့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေလဲ တုံ့နှေးကုန်တာပေါ့။ တခါ ကားဝယ်ချင်ရင် အိမ်ဝယ်ချင်ရင် ဘဏ်တွေက မချေးတော့ မ၀ယ်နိုင်ကြ။ ကားကုမ္ပဏီတွေလည်း ဒုက္ခရောက်၊ လူတွေ အလုပ်ပြုတ်၊ လူတွေ အလုပ်ပြုတ်တော့ ငွေမသုံးနိုင်ကြ။ အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တာပေါ့။
ဒါကြောင့် အစိုးရက Toxic Bonds (အဆိပ်သင့်စာချုပ်တွေ) တွေလို့ခေါ်ရမယ့် ဒီ “ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ” တွေကို “အစိုးရ” က လက်လွှဲဝယ်ယူပေ:မယ်။ အစိုးရက အရှုံးခံပေးမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ ဘဏ်တွေလဲ သက်သာရာရပြီး ငွေချေးလာရင် စီးပွားရေးပြန်လည်လာပြီး ပုံမှန်ရောက်သွားမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ အိမ်ဈေးတွေလည်း ပြန်ပုံမှန်ဖြစ်တော့မှ ဒီ ငွေကြေးစာချုပ် တွေကို ပြန်ရောင်းပြီး ငွေပြန်ဖော်ရမယ်ပေါ့။ ၁၉၃၀ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ The Great Depression ကာလကလည်း အစိုးရက အိမ်တွေကို ၀ယ်ပြီး အိမ်တွေဈေးတက်မှ ပြန်ရောင်းတာ မြတ်ဖူးပါတယ်။
တဖက်ကလည်း ဗဟိုဘဏ် Federal Reserve က အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့က သန်း ဘီလီယံ ၉၀၀ ဖိုး ဘဏ်တွေကို ပံ့ပိုးခဲ့ပြီး လိုအပ်ရင် ၁.၅ ထရီလီယံ အထိ တိုးပေးမယ် ဆိုပါတယ်။ ဒီ့ပြင် ယနေ့ (အောက်တိုဘာလ(၈) ရက်)နေ့ မှာနိုင်ငံ(၇)နိုင်ငံက ဗဟိုဘဏ်တွေဟာမကြုံစဖူးပြိုင်တူညီညီညာညာအတိုးနှုန်းတွေကိုချပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့က သြစတြေးလျှ ဗဟိုဘဏ်က ၁% တိတိ လျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။ အတိုးနှုန်းလျှော့ရင် ချေးခပေါတော့ ငွေပိုချေး ငွေပိုလည်အောင်ပါ။
ဒီပြဿနာဟာ အချိန်ယူဖြေရှင်းရမှာပါ။ ဒီပြင် တကမ္ဘာလုံး ဆက်စပ်နေတော့ ပိုရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဥပမာ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့က ဥရောပမှာ စတော့ ဈေးတွေ ထိုးကျပါတယ်။ အိုက်စလံ (Iceland)ဆိုတဲ့ နိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ပါ ဒေ၀ါလီခံရမလိုဖြစ်နေတယ်။ အိုက်စလံရဲ့ငွေ ခရိုနာဟာ တန်ဖိုးမဲ့သလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ ရုရှားမှာစတော့အရောင်းအ၀ယ်အကြိမ်ကြိမ်ရပ်ခဲ့ရတယ်။ဂျာမဏီက Hypo Real Estate ခေါ်တဲ့ Mortgage Company ကို ဂျာမာန်အစိုးရက ဒေါ်လာ ၆၉ ဘီလီယံဖိုးကူခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံက Fortis ဆိုတဲ့ ဘဏ်ကို အီတလီ BNP Paribas ဘဏ်က ၀ယ်ခဲ့ရတယ်။ Fortis မှာ ရှန်ဟိုင်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးအာမခံ ကုမ္ပဏီ Ping Au က ၄.၉၉% ဖိုးရင်းနှီးထားတာကြောင့် ၂၀၀၈ ခုမှာ Ping Au က ၂.၅ ဘီလီယံဒေါ်လာအရှုံးပေါ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Globalization ခေတ်မှာ အားလုံးဟာ အားလုံးနဲ့ ဆက်နွယ်နေပြီး သပွတ်အူလို ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ ဒီတချီ အာရှက အခံသာဆုံးပါပဲ။
၁၉၉၇ ခုနှစ်က အာရှငွေကြေးပြဿနာ Asian Financial Crisis ဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အာရှနိုင်ငံတွေဟာ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေလို ကိုယ့်ငွေနဲ့ ကိုယ်ကူနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေမရှိတာကြောင့် IMF က ၀င်ကူခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီ အမေရိကန် Investment Banks တွေကပဲ ၀င်ဆရာလုပ်ဗိုလ်ကျခဲ့ကြပါတယ်။ ခုတော့ တပတ်လည်ပြီး ဒင်းတို့ ဒုတ္ခတွေ့လိုက်တာ ကြီး(၅)ကြီးကနေ ခု (၂) ခုပဲ မားမားမတ်မတ် ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်ကြတော့ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အတွေ့အကြုံများအရ အာရှဘဏ်တွေဟာ ငွေပိုဖယ်ထားကြပြီး အရမ်း အန္တရာယ် (Risk) များတဲ့ စာချုပ်တွေကို အရမ်းမ၀ယ်ထားဖူးလို့ ယူဆရတဲ့ အတွက် ခံသာတယ်လို့ ခုချိန်ထိ ပြောရပါမယ်။
တချို့ကလည်း ရေရှည်ကို ကြည့်ပြီး အာရှဘဏ်တွေကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ရောက်သင့်ပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။
တောဟာ သိပ်ထူထပ်လာရင် သဘာဝအရ တောမီးလောင်ပြီး ပြာပုံထဲက သစ်ပင်အသစ်တွေ ပြန်ပေါက်၊ အချိန်ကြာတော့ တောသစ်အဖြစ် ရှင်သန်ကြပြန်တယ်။ တချို့က အာရှဘဏ်တွေဟာ ဒီတချီအပြီး ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစနစ်မှာ တွင်ကျယ်သက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကိုလိုနီစနစ်ကို ခါးခါးသီးသီးမုန်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတာကြောင့် အာရှခေတ်ရောက်စေချင်တယ်။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေကြောင့် နောက်ကျကန်ခဲ့ရတာကို ရင်နာမိပေမယ့် အာရှသားတွေ အောင်မြင်တာကိုတော့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ကျနော် အလွန်အားကျမိသည်မှာ ကျနော် ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ကို ရောက်ခဲ့ရတယ်။ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရခဲ့တာမို့ Unisys, New Bridge, HP, Cisco စတဲ့ Multinational လို့ခေါ်တဲ့ High Tech ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ ဓါးသွေးဥါဏ်သွေးခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်စဉ်နဲ့စနစ် Process and System ကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကိုယ်ရခဲ့တဲ့ အနှစ် (၂၀) ကျော်အတွေ့အကြုံနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာပြည်ကြီးကို အလုပ်အကျွေးပြုချင်တယ်။ ကိုယ့်အမိမြေကို မွေးကျေးဇူးပြန်ဆပ်ချင်တယ်။ ကျနော်လို လူတွေအများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ငမိုက်သား စစ်ဗိုလ်တွေက တိုင်းပြည်ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း တိုင်းပြည်ကို ရောင်းစားပြီး ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်နေတာကြောင့် ခုထိ အိမ်မပြန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သားတွေကလည်း တကမ္ဘာလုံး ပြန့်လွင့်၊ ပြည်သူ(၅၅) သန်းလုံးလဲမွဲတေ၊ အနှိပ်စက်ခံ၊ အနိုင်ခံနေရတာ မြင်ရတော့ ရင်နာမိတယ်။
ကျနော်တို့လိုပဲ တရုတ်ပြည်နှင့် အိန္ဒိယပြည်တို့ဟာလည်း ကျနော်လူဖြစ်စ ကလေးငယ်ဘ၀က ဆိုရှယ်လစ်စံနစ်ကြောင့် မွဲတေခဲ့ကြရတယ်။ ပညာတတ်တွေလဲ တိုးတက်ရာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ တိုးတက်မှုရှာရင်း လူကြီးဖြစ်လာ။ အတွေ့အကြုံရခဲ့ကြတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ မော်စီတုံးသေပြီး ဦးနှောက်နဲကြတဲ့ မော်ရဲ့မယား ချန်ချင်းခေါင်းဆောင်တဲ့ (၄) ယောက်ဂိုဏ်းပြိုကွဲပြီး တိန့်လျှောက်ဖိန်တက်လာတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးလမ်းကြောင်း ပြောင်းပြီးတိုးတက်လာတယ်။ အိန္ဒိယပြည်မှာလဲ BJP အာဏာရလာပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ခဲ့တာ အခုဆို တရုတ်ပြည်ကြီးနဲ့ အိန္ဒိယပြည်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အားဖြစ်ဖို့ တာစူနေကြပြီ။ တချိန်ထဲမှာ နိုင်ငံခြားမှာကြီး၊ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်၊ နိုင်ငံခြားမှာ အတွေ့အကြုံရလာတဲ့ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မိမိတို့နိုင်ငံကို ပြန်အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ပြန်လာကြတော့ အလွန်ပဲ အားကျမိတယ်။
ဒီ ပညာရှင်တွေကြောင့် ဒီတိုင်းပြည်တွေလဲ ပိုအားရှိ ပိုဖွံ့ဖြိုးလာတာပေါ့။ တချိန်က Wall Street မှာ ထိပ်က နေရာယူခဲ့တဲ့ လူတော် တရုတ်ပညာရှင်တွေဟာ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်လာပြီး ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပေါင်းပြီး တရုတ်ပြည်ကြီး အစွမ်းမရောက်အောင် ကူညီကြသလို တရုတ်ပြည်တိုးတက်ရေးမှာ ပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိကြတယ်။ ယနေ့ တရုတ်ပြည်ကြီးမှာ အသက် (၃၀) ကျော်ရင်ကြီးသွားပြီလို့ ယူဆတယ်။ လူငယ်တွေက အင်နဲ့ အားနဲ့ ကြိုးစားကြတယ်။ ၄၀/၅၀ ကျော်တွေက အတွေ့အကြုံရင့်လို့ အုပ်ချုပ်ကြတယ်။ ၆၀ ကျော်တွေက လမ်းပြပေးတယ်။ လူတိုင်း လိုလိုအခွင့်အရေးရတယ်။ လူတိုင်းကို (ပေး)စားတော့ လူလတ်တန်းစား တွေ တိုးလာတာပေါ့။ တချိန်ထဲမှာ လူတန်းစားကွာဟမှုကြီးလာတာ၊ Internal Migration ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့။ ဒါတွေက ကြီးပွားမှုရဲ့ ဒုက္ခတွေပေါ့။ ခုခေတ်မှာ လူအများတိုးတက်တယ်။ လူအနည်းစု ဒုက္ခရောက်နေတုန်းပဲပေါ့။ မော်စီတုံးခေတ်က လူတိုင်းမွဲတေနေပြီး သန်းပေါင်းများစွား ငတ်ပြတ်သေကြေခဲ့ရတယ်။
ကျနော် တရုတ်နဲ့ ကုလားတွေကို ပိုအားကျမိတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ မော်စီတုံးခေတ်က မကျော်နိုင်သေးဘူး။ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ စစ်သားတွေ ဖိနပ်အောက်မှာ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ ၀ဋ်ခံနေတုန်းပဲ။ တချိန်မှာ လွတ်လပ်မှာပါ။ ကျနော် တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တိုင်အလုပ်အကျွေး မပြုနိုင်ခဲ့ရင်တောင် နောင်တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်ရမယ့် ဦးဆောင်တည်ထောင်ရမယ့် လူငယ်တွေကို အတွေ့အကြုံ မျှခဲ့ချင်တာ ကျနော့် စေတနာပါ။
တိုင်းပြည်တခုဖြစ်စေ၊ လူတဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အများအားဖြင့် တိုးတက်အောင်မြင်လာရင် နောက်ဆုံး စီးပွားရေးကို နားလည်လာရတော့တာပါပဲ။ Astronomy – Anthropology ကဲ့သို့ ဘာသာရပ်များက လွယ်လို့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်ဖြစ်စေ၊ မြင့်လာရင် အုပ်ချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှုက တဆင့်မြင့်လာရင် စီးပွားရေးပညာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ လုပ်ငန်းဆိုတာ အရှုံး/အမြတ် profit & loss (P/L)ကိုရင်ဆိုင်ရတာပဲ မဟုတ်လား။ ဘာလုပ်ငန်းမဆို နောက်ဆုံး အမြတ်မရှိဘဲ ၀င်ငွေမရှိဘဲ ကြာကြာမရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိုမှီတည်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ဆေးပညာကို မှီတဲ့ ဆေးရုံလုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ သိပ္ပံပညာရပ်ကို မှီတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းကို ဦးစီးရတာနဲ့ အရှုံး/အမြတ် စီးပွားရေးကို နားလည့်ရပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ နိုင်ငံရေးမှာ အာဏာရလာပြီးရင် တိုင်းပြည်ကို ချစ်စိတ်ရှိရင် တိုင်းပြည်ကို ထူထောင်ရပါမယ်။ တိုင်းပြည်ထူထောင်ချင်ရင် စီးပွားရေးကို နားလည်ရပါတော့မယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားရင် စီးပွားရေးကိုလည်း အသင့်အတင့် နားလည်ရပါမယ်။ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုကျော်ငြိမ်း၊ ကိုနု၊ ကိုရာရှစ်တို့ဟာ ကျောင်းသား ဘ၀မှာ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲ ၀င်ကြတော့ စာဖတ်ကြရတယ်။ တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့ အတွက် စီးပွားရေးကို လေ့လာခဲ့ကြရတယ်။ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်မလာခင်ကတည်းကို တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုထူထောင်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့ကြရပြီး တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာတော့ ဘယ်လမ်းကြောင်းကို ရွေးရမယ်ဆိုတာ နားလည်ကြတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင်ယူပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်တွေကို ၀ါဒရေးကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ တိုက်ခိုက် တိုက်ခိုက် လွတ်လပ်ပြီးစ (၁၀) နှစ် ပါလီမာန် ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မြန်မာပြည်ဟာ အတိုးတက်ဆုံးဆိုတာကို ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါ။ အဲ့ဒီခေတ်က မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်အတင်ပို့ဆုံးနိုင်ငံ။
မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်ဟာ ဂျပန်က နာရီတာပြီးရင် ဒုတိယအကြီးဆုံး၊ ယိုးဒယားတွေက ရန်ကုန်ကို ဈေးလာဝယ်ကြရတယ်။ မြန်မာတယောက်ရဲ့ ၀င်ငွေ ဟာ စင်္ကာပူနဲ့ တန်းတူ၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အလားအလား အရှိဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ ရွှေနှစ်များ Golden Years လို့ခေါ်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီခေတ်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဘီပွန်စွန်ကရမ်းဟာ မြန်မာပြည်တိုးတက်နေတာကို မြင်တွေ့ရပြီး ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် (နိုင်ငံတော်စီးပွားရေး) တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ ကျနော့် အဖေရှေ့မှာ သူ့ဝန်ကြီးကို ကြိမ်းလိုက်တာ။ ခုတော့ စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို လိုက်မမှီတော့လောက်အောင် နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ။ ဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင် တိုက်ရမှာက ပထမ၊ ဒီမိုကရေစီရပြီးရင် တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရင် စီးပွားရေး နားမလည်၍ မရပါ။ ဒါကြောင့် အထူးသဖြင့် သူငယ်လေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ချင်တယ်။ မြန်မာဖြစ်ရတာ မြန်မာပြည်ကဟေ့ဆိုတာကို ရဲရဲကြီး ပြောပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့ခေတ်ကို ပြန်ရောက်ချင်တယ်။ ရောက်ရမှာပါ။ ရောက်ကို ရောက်ရမယ်။
Posted by Ko Nge at Friday, June 05, 2015